HORDHAC: Arsenal vs Manchester United – Solskjaer Oo Kaalinta 3aad Iman Kara, Shaxaha Macquulka Ah, Rikoodhka Kulamadoodii Hore Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey – Latest Sports News
HORDHAC: Arsenal vs Manchester United – Solskjaer Oo Kaalinta 3aad Iman Kara, Shaxaha Macquulka Ah, Rikoodhka Kulamadoodii Hore Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
Manchester United oo qaab ciyaareed wanaagsan ku jirta ayaa u safraysa garoonka Emirates Stadium oo ay kula ciyaari doonto Arsenal, halkaas oo ay ku hirdami doonaan inay kala riixdaan labada boos ee kaalinta afraad oo hadda Man United ay ku jirto iyo kaalinta saddexaad oo furantay markii ay khasaarihii saddexaad oo xidhiidh ah la kulantay Tottenham oo guul-darro 2-1 ah kala soo laabatay ciyaartii Southampton.
Red Devils oo aan hal ciyaar oo horyaalka ah aan khasaare la kulmin intii uu xilka hayey tarbabare Ole Gunnar Solskjaer oo bishii December la wareegay ayaa waxay hal dhibic ka sarraysaa Arsenal oo kaalinta shanaad ku jirta, waxaanay u bahaan tahay guul goolal badan ah si ay u timaaddo kaalinta saddexaad, hase yeeshee Arsenal ayaa iyaduna guul ay gaadho kusoo geli doonta booska afraad oo ay ka saari doonto Man United.
Kooxda martida loo yahay ee Arsenal oo saddex guulood oo xidhiidh ah gaadhay ka hor intii aanay Tottenham jilbaha u dhiganin, isla markaana aanu khasaare kasoo gaadhin lugtii koowaad ee Europa League ee Rennes ay lasoo ciyaareen Khamiistii, ayaa waxay wax walba u samayn doontaa inay kasoo aargoosato Manchester United oo ka reebtay tartanka FA Cup.
Haddii khasaare kale ay kasoo hoyso ciyaartan, waxa su’aal la gelin doonaa mustaqbalka tababare Unai Emery oo uu kusii kordhayo cadaadisku, waxaana iskugu darsami doona koob la’aan ay ahaan doonaan xili ciyaareedka iyo inay ka qadaan tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe haddii aanay ku guuleysanin Europa League.
Arsenal rikoodh fiican ayay ku haysataa kulamada garoonkeeda, dhamaan siddeedii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee Premier League ee ay ku ciyaartay Emirates Stadium na waxay kasoo hoysay guulo, waxaana ay raadinaysaa inay sagaal kulan oo xidhiidh ah ka dhigato guulaha garoonkeeda taas oo ay ugu dambaysay xili ciyaareedkii 2014-15. Laakiin kulamada xidhiidhka ah ee guulaha Emirates, waxa soo dhex galay guul-darradii ay Manchester United kusoo badday ee 3-1 ay kaga reebtay FA Cup oo marayey wareegga shanaad dhamaadka bishii January.
Laba jeer oo kaliya ayay Arsenal ku dhacday taariikhdeeda in hal koox ay laba jeer kaga badiso garoonkeeda, waana xili ciyaareedyadii 1987-88 iyo 1993-94, waxaana guul-darrooyinkaas u xambaariyey Nottingham Forest iyo Aston Villa, waana inay ka dagaallanto in Manchester United ay noqoto naadigii saddexaad ee taariikhdaas ku biira.
Marka si guud loo eego, lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League, Arsenal waxay guuleysatay afar ka mid ah, mid barbar-dhac ah iyo hal khasaare ah.
Dhinaca Manchester United, iyadoo xaaladdu ku xun tahay ayaa bishii December uu xilka la wareegay Ole Gunnar Solskjaer, waxaanay mar kaliya isku beddeshay naadi aanay guul-darradaba is aqoonin.
Manchester United waxay fursad u haysataa ciyaartan inay la dhibco noqoto Tottenham oo ay kaalinta saddexaad ku qabsato, waana meel aan laga filaynin laba bilood ka hor inay marnaba soo gaadhi karto.
Ciyaartii hore ee horyaalka ee garoonka Old Trafford ku dhex martay Manchester United iyo Arsenal waxay kusoo kala baxeen 2-2, laakiin Arsenal ayaa iska khasaarisay fursado ay guusha ku heli karayeen, halka Jose Mourinho uu ku qanacsanaa barbarraha oo ay khubarada ciyaaruhu ku doodayeen in aanay United u qalmin kulankaas.
Maalintii ay ciyaartaasi dhacday, Manchester United waxay ka dambaysay Arsenal oo booska afraad fadhiday 11 dhibcood, maantana iyadii ayaa ka horreysa hal dhibic, waana arrin mucjiso oo kale ah oo uu sameeyey Ole Gunnar Solskjaer oo xilka qabtay toddobaad ka hor ciiddii Masiixiga ee dhamaadka bishii December.
Inkasta oo uu yahay tababare ku-meelgaadh ah, haddana waxa uu Solskjaer keenay Man United booska afraad iyo inay ku hammido kaalinta saddexaad, usoo baxdo wareegga siddeed dhamaadka Champions League, iyo sidoo kale FA Cup.
17 ciyaarood oo uu hoggaamiyey, waxa Manchester United ay guuleysatay 14 ka mid ah, mid laga adkaaday iyo laba barbarro ah, waxaana kulanka khasaaruhu uu ahaa lugtii koowaad ee PSG oo uu ciyaartii dambe kaga soo aargoostay.
Kulamada horyaalka Premier League ee uu tababare Solskjaer hoggaaminayey Manchester United, waxay ahaayeen 12 ciyaarood, waxaana uu uga soo hooyey 32 ka mid ah 36 dhibcood oo ay ka heli lahaayeen, waxaana kaliya uu barbar-dhac la galay Burnley iyo Liverpool, halka uu tobanka ciyaarood ee kalena wada guuleystay.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee ay martida noqdeen, dhamaantood waxay Man United kala soo laabatay guulo, waxaanay raadinaysaa guul toddobaad si ay usoo barbarrayso rikoodhkeedii 1993kii oo ay toddoba ciyaarood oo ay bannaanka uga baxday garoonkeeda ay guul lasoo laabatay.
Marka la eego lixdii ciiyaarood ee ugu dambaysay ee horyaalka Premier League, Manchester United waxay soo guuleysatay afar ka mid ah, labada kalena barbar-dhac ayay gashay.
Ciyaarta: Arsenal vs Man United
Tartanka: Premier League, usbuuca 30aad
Garsooraha: Jonathan Moss.
Solskjaer waxa ka maqnaa ku dhowaad kooxdiisii koowaad oo dhan kulankii ay Man United u tagtay Paris Saint-Germain, laakiin ka hor ciyaartan waxa lagu war geliyey inuu helay qaar ka mid ah halyeeyadii uu ku hawl-galayey.
Martial oo laba gool ka dhaliyey Arsenal kulankii hore, ayaa la filayaa inuu kusoo laabto safka koowaad kaddib muddo bil ah oo uu dhaawac ku maqnaa, sidoo kalena waxa khadka dhexe hoggaamin doona Paul Pogba oo ka mid ahaa tobankii ciyaaryahan ee seegay kulankii PSG oo uu isagu ganaax ahaa.
Eric Baily oo dhaawac lagaga saaray ciyaartii PSG ayaa taam u noqday kulankan, laakiin waxa aan gebi ahaanba lagu xisaabtami doonin xiddigaha Ander Herrera, Nemanja Matic, Antonio Valencia, Phil Jones, Matteo Darmian, Jesse Lingard, Juan Mata iyo Alexis Sanchez.
Dhinaca Arsenal, waxa ciyaartan ka maqnaan doona Lucas Torreira oo ganaax saddex ciyaarood ah ku mutaystay kaadhkii casaa ee uu qaatay kulankii Tottenham, sidoo kalena waxa aan fursad u heli doonin oo dhaawacyo ah Danny Welbeck, Rob Holding iyo Hector Bellerin.
Tababare Unai Emery ayaa waxa uu fursad u heli doonaa inuu ciyaarsiiyo difaaciisa Sokratis oo kaadh cas qaatay ciyaartii Rennes, sidoo kalena waxa taam ah Alexandre Lacazette iyo Aubameyang.
Lacazette oo ganaax ku fadhiyey ciyaartii Rennes haddii uu gool ka dhaliyo Man United wuxuu noqon doonaa ciyaartoygii labaad ee taariikhda Arsenal u dhaliya goolal lix ciyaarood oo xidhiidh ah oo ay garoonkeeda ku ciyaartay, waxaanna uga horreeyey Thierry Henry oo sannadkii 2000 lix kulan goolal dhaliyey, halka uu sannadkii 2004 na toddoba ciyaarood oo xidhiidh ah goolal ku dhaliyey hoyga Arsenal.
Emery ayaa baasha midig u kala dooran doona Ainsley Maitland-Niles oo labadii usbuuc ee u dambeeyey kaydka fadhiyey kaddib dhaawac uu kasoo laabtay iyo Shkodran Mustafi oo booska sii buuxiyey.
Laba ka mid ah saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League ay ku qaabishay Man United, Arsenal waxay guuleysatay laba ka mid ah, midda kalena dhibcaha ayaa laga qaatay, waana guulihii ugu badnaa marka la eego siddeedii ciyaarood ee ka horreeyey.
Markii ugu dambaysay ee Emirates ay ku wada ciyaaraan, waxay guushu raacday Man United oo ka reebtay FA Cup, waxaanay maanta raadinaysaa in markii labaad ay guul kasoo gaadho, iyadoo sidaas oo kale ku samaysay 1985kii.
Sagaal ka mid ah 13-kii guulood ee Premier League ee Arsenal ay ka gaadhay Manchester United, ayaa qabsoomay maalin Axad ah, waana maalin u barakaysan Gunners.